နွေဦးတော်လှန်ရေးလမ်းခုလတ်တွင် ကျဆုံးခဲ့သော ဂီတအနုပညာရှင် “ရေမွန်” အတွက် သူငယ်ချင… – PVTV Myanmar
နွေဦးတော်လှန်ရေးလမ်းခုလတ်တွင် ကျဆုံးခဲ့သော ဂီတအနုပညာရှင် “ရေမွန်” အတွက် သူငယ်ချင်းများရဲ့ အမှတ်တရစကားတွေကို နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 78K Share – 6770
Phyo Eain Thin says:
2021-06-27 at 6:37 PM
ကိုဇာနည် စိတ်​တော်​တော်ထိခိုက်​နေပုံဘဲ… (အ​နောက်ကအသံ​တွေ မထည့်ပါနဲ့လားဗျာ)
အမရာ သင္း says:
ကိုRကြီး ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပါ အသံရော မျက်နှာရော အားမရဘူး
Ye Mharn says:
2021-06-27 at 6:50 PM
Novem နောက်ဆုံးပြောသွားတဲ့ စကားကိုလေးစားပါတယ်.🤟
2021-06-27 at 6:58 PM
PVTVရေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းပြကြယ်တွေကို ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါလို့ပြောပေးဗျာ
တန်ဖိုးဖြတ်မရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေ အသက်တွေ လွယ်လွယ်ပေးလိုက်ရတာ မတန်ဘူးဗျာ
Orange Lay says:
ကို Rဇာနည် ကြည့်ရတာ အားမရလိုက်တာ ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးလား ?
မျက်ကွင်းတွေလဲ ညိုနေတယ် .
Suu Thakhin says:
အားလံုးကျန်းမာေရးဂ႐ုစိုက်ကြပါ ေရာက်ရာအရပ်က ေန ကြံ.ခိူင်စွာဖြင့် တိုက်ပွဲတိုင်းမာ ေအာင်မြင်ပါေစ အမြန်ဆံုးမိသားစုအားလံုးေတွ့ရပါေစ
ကိုRရီး ရေ ကိုယ့်ကို ဂရုစိုက်ပါအူး‌ ရေမွန်ကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရပီးပီ နောက်ထပ် ဘယ်သူ့ကိုမှ ထပ်ပီး အဆုံးရှုံး မခံပါရစေနဲ့
Harricane Koala says:
နောက်ခံတီးလုံး အရမ်းကျယ်တော့ ပြောတဲ့စကားလုံးတွေ သေချာမကြားရတော့ဘူး
Phyo Thiha Kyaw says:
2021-06-27 at 7:49 PM
​ေနာက္​ခံတီးလုံးက အဆက္​မ​ေျပဘူးဗ်ာ နား​ေထာင္​ရတာ
Hnin Pwint Chit Thu says:
Kyawt Kyawt ကျော့ရေ မဗိုလ်တော့ငို‌နေရပြန်ပြီ အဆင်ပြေမနေသေးဘူးကွာ..Idolကြီးသီချင်းသံတွေကြားတိုင်း မျက်ရည်ကကျနေတုန်းပဲ…ဆုံးရှုံးရတာတွေတကယ်မတန်ဘူးကွာ…😥😭😭
Coral Óǿ says:
2021-06-27 at 8:01 PM
တီးလုံးကြီက တော်တော့ အဆင်မပြေဘူး နားထောင်ရတာ
ကုိRဇာနည္ ပိန္သြားတယ္ ဂ႐ုစုိက္ပါ အေရးေတာ္ပုံေအာင္ကုိေအာင္ရမယ္💪💪💪
Zinn Zinn Lwin says:
2021-06-27 at 8:23 PM
အားလုံး အထူးဂရုစိုက်ကြပါ။ နောက်ထပ် ကြယ်တွေ အချိန်မတိုင်ခင် မကြွေစေချင်တော့ဘူးလေ
Mi Kyar says:
ကိုRဇာနည်လည်း ပိန်သွားလိုက်တာ။ မျက်လုံးကနေ မကျေနပ်တာတွေ ယူကြုံးမရဖြစ်နေတာတွေ အတိုင်းသားမြင်နေရတယ်။ ထပ်တူလညိး ခံစားမိပါတယ်။ အဆင်မှပြေရဲ့လား အကိုရေ။ ကျန်းမာရေးလည်းဂရုစိုက်ပါ ။လုံခြုံရေးလည်းဂရုစိုက်ပါ။ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ။ ဘေးကင်းပါစေ အကိုရေ
Win Sandar Htwe says:
ကိုယ်အကြိုက်ဆုံး Metal အဆိုတော်ထဲမှာ Raymond ပါတယ် လူနဲ့အသံနဲ့မလိုက်လို့ အမြဲချီးကျူးရတာ ထပ်တူဝမ်းနည်းရပါတယ် 😔
S M Ko says:
2021-06-27 at 8:57 PM
ေကာင္းမြန္ရာဘံုဘဝမွာ နားခိုပါ ကိုေရမြန္😭😭
Shwe Sin Ei says:
2021-06-27 at 9:00 PM
ရုပ်ခန္ဓာ​သေဆုံးသွား​ပေမယ့် သူ့နှလုံးသား အားလုံးရင်မှာရှင်သန်​နေမြဲပါ..
ဆန္ဒ မောင် says:
2021-06-27 at 9:09 PM
နောက်ခံသံ က အရမ်းကျယ်လွန်းတယ်၊ပြောတဲ့သူရဲ့ အသံကို သေချာနားထောင်နေရတယ်။နောက်တစ်ခါကျရင် နောက်ခံသံတိုးပေးပါ။
2021-06-27 at 9:12 PM
ကိုဇာနည်လဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဂရုစိုက်ပါ။ ဘယ်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ ထပ်ပီး အဆုံးရှုံး မခံနိုင်လို့ပါ။
Thida Hkoon Hkoon says:
သူအသံကြားတိုင်းဝမ်းနဲပြီး ငိုချင်လာတယ် အရင်ကလဲ ုကိုက်ခဲ့တာမဟုတ်
တော်တယ်ကောင်းတယ် ဒါလောက်ပဲ သိတယ် သူသေတော့ အရမ်းနှမျော ဝမ်းနဲ့တဲ့စိတ်မ​ေပျာက်ဘူး
Hnin Khat says:
2021-06-27 at 10:03 PM
နွားတွေသာ အာဏာမရူးခဲ့ရင် ဘသူမှ မသေဘူး ဘသူမှတောမခိုဘူး လက်နက်လည်း မကိုင်ဘူး။အခုတော့ အဖိုးတန်လူသားတွေ သေကြ ခွဲကြရတာ။တောထဲမှာ ဘလိုနေထိုင်နေရလဲ တကယ် ကို စိတ်မချမ်းသာပါဘူး။ဂရုစိုက်ပြီး အသက်ရှည်အောင်နေပေးကြပါ။ကျန်းမာရေးလည်းဂရုစိုက်ပါ။အဖိုးတန် အမျိုးကောင်းသားတွေ အားတင်းထားပါ။ငါတို့နိုင်မှာ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်💪💪💪
Htut Myat says:
ကိုရန္ရန္းခ်န္း ေျပာခဲ့ သလိုပဲ ေရမြန္ လူျပန္ျဖစ္ရင္ လူသားခ်င္းစာနာတဲ့တိုင္းျပည္မွာ ျပန္ျဖစ္ ပါေစ ေကာင္းရာဘံု မွာ ေအးခ်မ္း ပါေစ။
ကိုအာဇာနည္ လဲ က်န္းမာေရး ဂရုစိုက္ ပါ။
အကိုရေ အကုန်လုံးက ခံစားနေကြရတယ် ကျနော်တို့တွေကိုသနားရင် ပြန်လာခဲ့ပါဗျာလက်ခံလို့တကယ်မရသေးဘူး အကိုရ 😢😢
2021-06-27 at 10:18 PM
Rဇာနည်ကပြိုလဲ‌နေလိုက်တာ Novem Htooပြောတော့ မျက်ရည်ကျပြီ miss u lots bro 💔
2021-06-28 at 12:01 AM
ကိုရေမွန် ဆံုးတာကို ပထမက မယုံနိုင်ဘူး
နောက် သူ သူဂြိုလ် တဲ့ရက် မှ သူဆုံးသွားပီဆိုတာလက်ခံလိုက်တယ်
ကိုရေမွန် မီးသဂြိုလ်ပုံတေွတက်လာတယ် ဝင်မကြည့်တော့ဘူး ကိုရေမွန် နဲ့ပက်သက်တဲ့ပူဆေွးမှုတေွဝင်မကြည့်တော့ဘူး
ကိုရေမွန် စစနောက်နောက်နဲ့ အင်တာဗျူးဖြေထားတာတေွကြည့်ပီး ရီတယ် sad react တောင် ကျမ မပေးတော့ဘူးLove react ပဲပေးတော့တယ်